Unyaka omtsha, isiqalo esitsha
Ixesha lihamba ngokukhawuleza, ngokungaqondanga kunye nokuphela konyaka. Kwi-2020, siye safumana i-COVID-19, kodwa sinombulelo kwinkampani yomnye nomnye, ethe yasenza somelela ngokwaneleyo ukuba siphile kwixesha elinzima. Intsimbi ka 2020.2021 imalunga ukukhala. Ndiyathemba ukuba usazakusikhapha ...
UZhejiang Feegoo Technology Co, Ltd. Yiya kwi-2020 CEC EXPO
Njengobhubhane we-COVID-19 wehlabathi uqhubeka nokusasazeka phesheya kolwandle, amashishini orhwebo angaphandle ajongene nengxaki "yokungabikho kwabasebenzi" kwisiqingatha sokuqala kunye "nokusilela kwee-odolo" kwisiqingatha sesibini. Ishishini lokukhanya lase China, njengelizwe elikhulu kurhwebo lwangaphandle, ...
Ungabuthintela njani ubhubhane obuvela kumntu ngamnye
Njengoko ixesha lihamba, i-2020 ngunyaka wokufezekisa intlalontle enenkqubela phambili ngandlela zonke. Abantu kufuneka bavuye kwaye bonwabile ngale nto. Ngelixa abantu besabhaptizwa kuvuyo loNyaka oMtsha, imfazwe engenamsi sele iqalile ngokusesikweni ngalo mzuzu intsimbi yoNyaka wamakhonkco eRat. NgoNovemba ...
Sisebenza nzima ukuzikhusela ngokuchasene ne-2019-nCov, sinethemba lokuba iimveliso zethu zesepha zinokunceda abantu
Ihlabathi ngoku lisemngciphekweni wobhubhane we-coronavirus, utshilo umlawuli jikelele we-World Health Organisation, ngelixa evakalisa inkxalabo enzulu "ngamanqanaba othusayo okungasebenzi" kumlo wokulwa nokusasazeka kwesi sifo. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, inani lamatyala ...
Zisebenza njani izomisi zezandla, kunjalo?
Nokuba usebenza eofisini, wenze umthambo kwiziko lokuzonwabisa okanye utye kwindawo yokutyela, ukuhlamba izandla kunye nokomisa ngesandla zizinto zemihla ngemihla. Nangona kulula ukungahoyi indlela ezomisa izandla zisebenza ngayo, iinyani zinokukumangalisa-kwaye ngokuqinisekileyo ziya kukwenza ukuba ucinge kabini kwixesha elizayo xa usithi ...
Ubungakanani bemoto engenakususwa
ngomphathi ku 19-06-24
Izixhobo ze-brushless motors zingasetyenziselwa ishishini lobisi, ishishini lokwenziwa kwenyama, ishishini lokulungisa inyama yeembotyi zesoya, ishishini lokulungisa iziselo, ishishini lokulungisa izonka, amayeza, ifektri yokuchaneka ngombane, kunye nezinye iindibano zocweyo ezicocekileyo njalo njalo, ii. ..
I-FEEGOO Yiya kwi-124th Canton Fair
ngomphathi ku 18-11-26
I-124th (Autumn) yeCanton Fair yakhatywa e-Guangzhou International Convention nakwiziko leMiboniso. I-Zhejiang FEEGOO Technology Co, Ltd. ithathe inxaxheba kwi-Fair Canton kunye neemveliso ezintsha zoqobo, kwakhona itsala umdla wabathengi kwihlabathi liphela kunye nokufezekisa ...
I-FEEGOO Isomisi esinezandla ezininzi
Iscreen sokuchukumisa umoya Isantya somoya kunye nobushushu bomoya buhlengahlengisiwe Layisha imifanekiso eyakhelwe-ngaphakathi kwi-HEPA https://player.youku.com/embed/XMzQ5OTE0NzM5Ng==
I-FEEGOO Uyilo olutsha olunamacala amabini oluSomisa ngesandla
ngomphathi ku 18-08-05
Izinto zentsimbi ezingama-304 / umoya oshushu okanye obandayo / iHepa https://player.youku.com/embed/XMzQ5NjY5MTE1Mg==
I-FEEGOO Ultra-thin Smart Robot ecocekileyo
I-1.6.6CM yomzimba ocekeceke, ukuhamba ngokukhululekileyo, isiliphu phantsi kwefanitshala eninzi ukucoca ikona yakho engabonakaliyo. Ukulawulwa okukude kwe-2.APP, nokuba kuyadibana, kuyasebenza okanye ngeholide, vula nje kwaye usebenzise, ​​ukonwabele ukucoceka kwakho xa ufikile ekhaya. Uyilo lomntu ongu-3-ukubonisa kwiscreen. Ukucoca 4.Smart kunye nokutshaja ngokuzenzekelayo. 5. Ixesha ...
I-Zhejiang Feegoo Technology Co, Ltd. Yiya kwi-7th China (Poland) yezoRhwebo
Phantse iinkampani ezingama-700 ezivela eZhejiang, Jiangsu, Guangdong, Jiangsu, Henan, Shandong, Jiangxi, Fujian nakwezinye iindawo ezithathe inxaxheba kulo mboniso. Phantse i-1,400 iminquba yayimiselwe kwisiza, sinendawo yokubonisa ye-28,000 yeemitha zesikwere. Imiboniso emibini ephambili (emva komboniso waseDubai). Umdlalo ...
Kutheni ukhetha i-FEEGOO yesithandathu isiBini esiJikeleze amacala amabini eJet yesomisi?
ngomphathi ku 18-03-18
Njengoko wonke umntu esazi, isomisi sejethi esinamacala amabini sisisixhobo esicocekileyo esisetyenziselwa ukomisa izandla kwigumbi lokuhlambela, ngelixa i-FEEGOO yesithandathu-isizukulwane sesithandathu ijikeleze icala lesibini, xa kuthelekiswa nohlobo lwendabuko. le modeli yesandla yokomisa ngesandla iya kuba ibalasele ekugcineni amandla kunye ne ...